Xarunta Shiinaha waxay latheysaa lathe Taakuleynta warshad duubista iyo soosaarayaasha | Oturn
Lathe CNC laba-dhammaad ah Lathe CNC-ka laba-dhammaadka ah waa mashiin wax-ku-ool ah oo saxnaan sare leh. Qalabka shaqada ee la xiray wuxuu rogi karaa wareegga kore, wajiga dhamaadka iyo daloolka gudaha isla waqtigaas.
Lathe CNC-laba-dhamaadka waa mashiin hufan oo sax ah. Qalabka shaqada ee la xiray wuxuu rogi karaa wareegga kore, wajiga dhamaadka iyo daloolka gudaha isla waqtigaas. Wax-soo-saarka wax-soo-saarku wuu ka sarreeyaa habka dhaqameed, wadajirka iyo saxsanaanta qaybaha la farsameeyay ayaa ka fiican.
Marka la eego codsiga macaamilka, rarista iyo dejinta aaladaha caawinta ah iyo qalabka wax lagu raro iyo dejinta otomaatiga ah waxaa loo bixin karaa si aan kala sooc lahayn
Lathe CNC laba-dunmiiqa
Qalabka mashiinka waxaa badanaa loo adeegsadaa rogista wiish gaagaaban iyo qaybo yar oo disk ah.
Iyadoo loo marayo wareejinta otomaatiga ah ee udhaxeysa labada isku xigxiga ee qalabka wax lagu shaqeynayo, mashiinku wuxuu dhameystirayaa howsha daloolka gudaha, wareega wareega iyo labada daraf ee qeybta siday u kala horreeyaan.
Mashiinka waxaa lagu qalabeyn karaa manipulators, si otomaatig ah u raritaan iyo dejin iyo aalado kaydinta si loo dhameystiro si buuxda otomaatiga u shaqeynaya ee qaybaha.t waxaa si gaar ah loogu sameeyay soo-jeedinta leexashada ee gaagaaban iyo qaybo saxan yar.
Taageerida Xalinta Mashiinka Mashiinka
Rullaluistemadka taageerada waa mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee "afarta taayir iyo hal suun" ee cagaf cagafyada iyo qodista hawo-yahanka.
Waxaa jira 4 qeexitaanno ah rollers bulldozer iyo 7 qeexitaanno ee rullaluistemadka qodista, sida ku cad moodelladayada jira, waxaan uqeybsan nahay 3 qaybood:
Taageerada kala duwanaanta faahfaahinta iyo mashiinka lagu taliyay
Dhexdhexaadinta isku dhejinta
(Ku saabsan 2D)
Qallafsan 234 (alaab dhameystiran 225)
Qallafsan 286 (alaab dhameystiran 279)
In la horumariyo
Jaantuska Schematic ee taageeraya rullaluistemadka waxaa ka baaraandega mashiinka sida soo socota
SCK205S lathe CNC-laba-gees ah
■ Mashiinku wuxuu qaataa 450 qaabeynta sariirta janjeedha, oo leh qallafsanaan wanaagsan iyo saaris ku habboon qashin
Box Sanduuqa dunmiiqa wuxuu isku daraa saddexda qaybood ee nidaamka dunmiiqa, dhejiska iyo silsiladda isku haysa, oo leh qaab dhismeed is haysta iyo shaqo lagu kalsoonaan karo. Qalabku waa hydrocically haysa. Dhexdhexaadinta isku haysa ee isku haysa waxay u qaybsan tahay laba baloog.
C Qabsashadu waa nooca loo yaqaan 'collet type'. Jaangooyooyinka hagaajinta ayaa lagu rakibay chuck laastik ah si loogu beddelo qaybaha wax lagu shaqeynayo loona beddelo dhexroorka isku haysa. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad beddesho ciddiyaha isku hagaajinaya, taas oo dhakhso leh oo habboon.
Tools Qalab badan oo lagu caajiso ayaa loo baahan yahay iyadoo loo eegayo qaybaha mashiinnada lagu farsameeyo. Si looga fogaado faragelinta qalabka, turret waa la habeeyay, dhexroorka wareega ee madaxa gooyuhu waa weyn yahay. Si turret looga dhigo mid adag, dhererka dhexe ee buurta waa 125mm.
Mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa nidaam kontaroolo laba-kanaal ah, labada aaladoodna waxaa lagu xiri karaa dunmiiqa isku mar ama si gooni gooni ah si loo dhameystiro isku mar ama qaab isku xigxiga ee labada daraf qeybta.
■ Si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha kala duwan, qalabkan mashiinka waxaa lagu qalabeyn karaa qalabka bidix / midig ee macaamiisha ay doortaan.
■ Xagga raritaanka iyo dejinta, waqtigan xaadirka ah waa soo dejinta iyo dejinta gacanta. Iyadoo la tixgelinayo culeyska culus ee giraangiraha taageeraya, nooca truss ama nooca wadajirka ah ee si otomaatig ah u raraya ama u dejinaya qalabka ayaa la qalabeyn karaa, iyadoo ku xiran gorgortanka iibsadaha.
Dhexroor ugu badnaan sariirta
Dhexroor ugu badnaan wareega jirka
Dhexroor clamping ugu badnaan
Dhererka processing ugu badnaan
Ballaaran ee madaxa xoolaha
Qeexitaanka dunmiiqa dunmiiqa
Dhexroor godka dunmiiqa
Dherer min bartamaha dunmiiqa ilaa dhulka
Horey u shaqeynta
Howlsocodsiinta, qufulka Haydarooliga
Cabbirka laba jibbaaran mindi bannaanka ah
× 32. 32
Ballaca bar caajis
Baaxadda mashiinka (dherer, ballac, dherer,）
4920 × 1860 （1910） 00 1900
Hore: Nooca Flat
Xiga: CNC tuuboyinka Threading Lathe